ANDASKA GRAND CHALET-SPA YOKUNETHEZEKA IZINKANYEZI EZINGU-5 - I-Airbnb
ANDASKA GRAND CHALET-SPA YOKUNETHEZEKA IZINKANYEZI EZINGU-5
Muhlbach-sur-Munster, Alsace, i-France
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Denis
I-chalet ANDASKA yindlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni entsha engu-240, ehlukaniswe ngezinkanyezi ezingu-5, etholakala e-Alsace, enkabeni ye-Ballons des Vosges ipaki yemvelo, engu-800 m ngaphezu kolwandle, ebheke eningizimu ngombono ongavamile wezintaba zase-Vosgian.
Ingathatha abantu abangaba ngu-12 ezimweni ezingavamile zokunethezeka.
I-chalet Andaska yindlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni entsha, ehlukaniswe ngezinkanyezi ezingu-5, etholakala e-Alsace, enkabeni ye-Ballons des Vosges ipaki lemvelo, endaweni ephakeme ngo-800 m, ebheke eningizimu ngombono ongavamile wezintaba zase-Vosgian.
Iklanyelwe ukuhlalisa abantu abangaba ngu-12 ezimweni ezingavamile zokunethezeka, i-chalet inikeza, ku-240 m2, ukuhlobisa okufunwa kakhulu nokufudumele, ukuhlanganisa izinto ezihloniphekile namafasitela amakhulu e-bay ekwakhiweni okuvulekile ngokuphelele emvelweni.
Indawo yangempela yokuphumula entabeni ngemoto nje emfushane esuka e-Munster, i-Chalet Andaska iyindawo eyimfihlo, okunokunethezeka okubalulekile ukunikeza izivakashi zayo indawo eyingqayizivele ngesilinganiso somuntu futhi ikhuthaze ukuvakasha okungenakulibaleka e-Alsace nasezintabeni zase-Vosgian.
I-chalet inamakamelo okulala angu-5, wonke amagumbi okugezela angaphakathi, i-mezzanine enkulu, indawo enkulu yokuhlala futhi efudumele, indawo enhle kakhulu nenhlalakahle ye-spa endaweni enhle kakhulu yemvelo.
Amasevisi amaningi AFAKIWE esevisini, njengokwamukelwa okwenzelwe umuntu ngamunye, ukuhlinzekwa kombhede nelineni yendlu, kuhlanganise nama-bathrobe, ukuhlanzwa kwempelasonto, uxhumano lwe-WiFi, ukuhlinzekwa kwezinkuni zesitofu sase-Scandinavia, amanzi nogesi, ukusetshenziswa okungenamkhawulo kwe-sauna ne-jaccuzi.
Amakamelo okulala amahlanu, ahlotshisiwe NESAKHIWO
sawo, anikeza indawo enokuthula nendlela yokuphila ehlukile. Bonke bazuza emafasiteleni amakhulu abhekene nokukhanya kanye nama-balcony angasese avuleka ku-panorama engu-180-degree, ephendula ubulula befenisha nokuhlobisa.
- Esitezi sokuqala, ikamelo lokulala i-Edelweiss, elinendawo engu-22 m2, lihlanganisa imibhede engu-2 engu-90 x 200 cm ( i-modular yombhede omkhulu ongu-180 X 200, enomatilasi wokunethezeka ophezulu), ideski elincane, izihlalo ezingu-2, ikhabethe elikhulu. I-TV yesikrini esicaba. Ubhavu: i-shower, usinki olala abantu ababili nendlu yangasese.
- Esitezi sengadi, ikamelo elihle, elibheke eningizimu ne-balcony, elinendawo engu-22 m2, linombhede ontofontofo kakhulu ( 2 X 90 X 200 noma i-X 200 ngokwesidingo), ikhabethe lokushwibeka, ideski elincane, i-TV yesikrini esicaba. Igumbi lokugezela : I-shower enkulu, usinki olala abantu ababili nendlu yangasese ehlukile.
- Phezulu, ikamelo lokulala le-Arnica, elibheke eningizimu ne-balcony, linikeza indawo engu-22 m2 ngombhede omkhulu (180 x 200 cm), ikamelo lokugqokela, ideski elincane, i-TV yesikrini esicaba. Ubhavu: ishawa, usinki owodwa. Indlu yangasese ehlukile.
- Ikamelo lokulala laseNingizimu elibheke i-anemone elinovulande wangasese linombhede omkhulu ( 180 X 200), ikhabethe, ideski elincane, i-TV yesikrini esicaba. Ubhavu : Ubhavu, usinki olala abantu ababili, indlu yangasese ehlukile.
_Ikamelo lokulala le-Daffodil, libheke eningizimu, njengabo bonke abanye, liphinde libe ne-balcony yangasese, umbhede omkhulu, i-sliding wardrobe, i-flat-screen TV. Ikamelo lezempilo lineshawa engena endlini, usinki onosinki. Indlu yangasese ihlukile.
I-La SALON-SEJOUR Ikamelo lokuphumula, liyindawo enkulu enendawo engu-50 m2 evulekele ikhishi laseMelika elinakho konke okudingekayo. Kuzungeze umlilo wamapulangwe esitofini sase-Scandinavia, esifakwe ngokunethezeka kumasofa amakhulu athokomele, azungeze isiphuzo, ukubona imvelo emangalisayo kukulindile emafasiteleni asuka phansi afike ophahleni.
Ngomndeni noma abangane, wabelana ngobumfihlo bokufihla intaba, ukubukeka kwangempela kanye nesimo esiyingqayizivele sendawo lapho imvelo ihlangana khona nokunethezeka nokunethezeka ukuze ikujabulise ngaso sonke isikhathi.
Kuzungeze itafula elikhulu lamapulangwe egumbini lokudlela, elinweba ikhishi elivulekile elinakho konke, thola injabulo yokwabelana ngesidlo esimnandi kalula, noma zama isevisi yethu yokupheka ehlinzeka, ekuletheni indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni, ikhadi lezinto ezikhethekile zesifunda nezidlo zokudla okuconsisa amathe, kanye nohlu oluhle lwewayini.
Uzokwazi futhi ukujabulela amasevisi ompheki wethu wasekhaya, ozolalela izifiso zakho ukuze alungiselele imenyu esezingeni eliphezulu azokulungiselela yona, endlini yeholidi eyakhiwe ngokhuni.
E-Chalet Andaska, uzoba nezikhathi ezimnandi kakhulu futhi wenze
izinkumbulo ezingenakulibaleka. i-mezzanine
I-mezzanine iyindawo evulekile, enombhede olala umuntu oyedwa ongu-2 (90 X 200 cm)
Ekugcineni, imidlalo eminingi yebhodi iyatholakala, ngezikhathi ezinohlonze ezihlanganyelwa phakathi kwemikhulu nemincane.
livulekele igumbi lokuphumula, ikhishi linakho konke okudingekayo :
umshini wokugeza izitsha, uhhavini wokushisa oguquguqukayo, i-microwave, i-induction cooktop, ifriji elikhulu ngebhokisi lefriji, umshini wekhofi we-Nespresso, imishini yokupheka yobuchwepheshe, i-toaster, i-juicer, i-blender, irobhothi lokupheka, amasethi e-raclette, i-pierrade, i-fondues, isevisi yetafula ehlanzisisiwe... izokuvumela ukuba ukhombise ngokugcwele wonke amakhono akho okupheka futhi usethe itafula lomcimbi.
Uzokwazi futhi ukusebenzisa ngokunenzuzo amasevisi ompheki wethu wasekhaya, ukulungiselela amamenyu akho asezingeni eliphezulu. E-Chalet Andaska, konke kwenziwa ukwenza ukuphila kwakho kube lula!!
Ithala elikhulu elibheke eningizimu liyakwamukela esimweni sezulu esifudumele.
Uhlezi kahle elangeni, uzojabulela ukuzola, nokuzola kokufunda, ukuvuselela noma ukushona kwelanga elangeni. Ngaphezu kwalokho, indawo yokosa inyama, amabhentshi kanye netafula elide elisikiwe esihlahleni esikhulu sikwamukela wena ngepikiniki lakho lasehlobo kanye nokugaya inyama.
Indawo yokudlala enama-swings ne-trampoline iyinjabulo kubantwana. Indawo
yokupaka ezimotweni ezimbili iphothula amasevisi angaphandle.
IKAMELO LOKUHLANZA IZINGUBO
Kunomshini wokuwasha nokomisa onamandla amakhulu, ama-ski locker kanye nomshini wokomisa oshisayo.
Indawo YENHLALAKAHLE ne-spa Indawo yenhlalakahle ne-spa ye-Chalet Andaska, eyenzelwe inhlalakahle yakho, inikeza ukuphumula nokukhululeka endaweni enikezelwe ngokukhululekile
Ngemva kosuku endaweni evulekile, ukuze uvuselele, ujabulele zonke izinzuzo nezimfanelo zemfudumalo ye-Vosges pine sauna enomusa yendabuko. Ngena kuma-bubbles e-Jacuzzi enkulu yangaphandle enezihlalo ezingu-6, ujabulele ukubhucungwa umzimba kanye nomphumela wokuphumula wamanzi ku-36 ° C kuyilapho ujabulela umoya othakazelisayo, ongokoqobo wasezintabeni, ukubukeka okuhlaba umxhwele kwezicongo zase-Vosgian, ukuze uthole okokuzithokozisa okuyingqayizivele okungokwezemvelo.
Bese uguquguquka ebhavini lakho elithambile, elithambile; esitolo setiye lamakhambi, ujabulele isiphuzo esifudumele esinezithelo, izinongo, noma ukunambitheka okumnandi, bese uphumula ngokunethezeka ewindini elingemuva kwelanga elivulekela emvelweni emangalisayo futhi uzivumele unqobe ngalokhu kuzwakala okumangalisayo kokuphumula nokuzola okutholakala futhi.
E-Chalet Andaska, thokozela ukuvumelana komzimba nengqondo.
Ipaki yamabhaluni aseVosges: Ipaki yemvelo yamabhaluni yaseVosges ihlanganisa u-3000 km2, phakathi kwe-Alsace, iVosges neFranche-Comté.
Isingatha amagugu emvelo namasiko amangalisayo futhi inikezela ngezindawo eziyizimpawu ezakha ingcebo yayo enkulu.
E-Munster, indlu yepaki iyakwamukela unyaka wonke.
- Ukuhamba Izintaba: Ngaphezulu kwamakhilomitha angama-350 wokuqwala izintaba esigodini saseMunster, ukuze uhambe kahle emiqashweni noma eduze kwamachibi uzothola isitshalo nezilwane ezihlukile.
- Ukuhamba ngebhayisikili ezintabeni: Isigodi saseMunster siyipharadesi langempela labagibeli bezintaba, elinamakhilomitha angaphezu kuka-300 wamasekhethi amakiwe.
- IGALOFU: Izinkundla zegalofu eziyi-8, ukusuka enyakatho kuye eningizimu yesifunda, zenza i-Alsace inkundla yokudlala ethokozelwa abathandi begalofu.
- Iziteshi ze-Ski:
Emaminithini angu-15, iSchnepfenried, ifakwe iziqhumane zeqhwa, iyindawo yokuphumula yomndeni esezingeni eliphezulu.
Ngokushushuluza eqhweni, ukusuka endaweni yokungcebeleka, cishe amakhilomitha angamashumi amabili wemizila ilandelwa futhi ivikelekile nsuku zonke.
Isiza se-Nordic four-four sinikeza amasekhethi okushushuluza eqhweni afinyeleleka kubo bonke endaweni yemvelo eyingqayizivele.
Ekugcineni, i-Tanet inikeza izindlela zemvelo, ezilungele ukuvakasha eqhweni.
- Snowshoeing: ukwenza uphawu lwakho eqhweni virgin, ukuphuma emizileni, ukujabulela imvelo engathintwa
- Izinja eziyisihlibhi; ohambweni lwamagquma
- Ukudoba: emifudlaneni yezintaba nasemachibini azungezwe ama-glacial cirques.
- Ukugibela amahhashi: embongolweni kumabhaluni eVosges noma ukugibela amahhashi, ukugibela izintaba, izifundo zangasese noma zeqembu,
- Izindiza zebhaluni
- I-aqua yokubhukuda ejabulisayo e-Munster noma ukubhukuda emachibini asezintabeni
- Umzila wewayini we-Alsace: uhamba phakathi kwezindawo zekhadi leposi
- Amadolobha namadolobhana aqhakaza anemihubhe emincane nezindlu ezinamapulangwe uhhafu eziqinisiwe ezizungeze imibhoshongo yazo yezinsimbi, ukwamukela ama-winstub, ama-geraniums nonogolantethe kwenza ukuthandeka okungenakuqhathaniswa kwe-Alsace ngemihlobiso yamakhadi okuposa.
- I-Colmar, inhloko-dolobha yamawayini e-Alsace, inikezela ngezindawo eziningi ezinhle
-Strasbourg, inhloko-dolobha yaseYurophu, iNdawo Yamagugu Omhlaba ye-UNESCO, izokumangaza ngesonto layo elikhulu le-sandstone eliphinki elingavamile.
-Izimakethe zikaKhisimusi: UKhisimusi unezwe, yi-Alsace!
Lapha, isikhathi sikaKhisimusi sithatha incazelo ephelele futhi ukuphila uKhisimusi wase-Alsatian kuyinto engenakulibaleka.
.- I-Maison du fromage de Munster: Kwakulapha, ekuqaleni kwekhulu lesi-9, lapho izindela zaseBenedictine zakha iresiphi yoshizi odumile.
Hlola ezinye izinketho ezise- Muhlbach-sur-Munster namaphethelo